Freshchat: Chat sy chatbot mitambatra, samy hafa fiteny, ary chatbot ho an'ny tranokalanao | Martech Zone
Na mitondra fiara ianao dia mitondra mankany amin'ny tranokalanao, miantsena ny mpiantsena, na manome ny fanohanan'ny mpanjifa… antenain'izy ireo amin'izao fotoana izao fa manana fahafaha-manao chat miaraka ny tranonkala tsirairay. Na dia tsotra aza izany dia betsaka ny fahasarotana amin'ny resaka chat… hatramin'ny fibaikoana ny resaka, ny fiaretana amin'ny spam, ny valiny mandeha ho azy, ny fivezivezena… mety ho aretin'andoha tokoa izany.
Ny ankamaroan'ny sehatra fifampiresahana dia tsotra… fampitaovana fotsiny eo anelanelan'ny ekipa mpanohana anao sy ny mpitsidika ny tranokalanao. Izany dia mamela banga sy fotoana lehibe eo amin'ny traikefan'ny mpanjifanao ary koa ny fahafahan'ny orinasanao manara-maso sy manampy ireo mpitsidika. Fresh Chat dia vahaolana matanjaka sy manerantany izay manome endri-javatra sy fampidirana taonina.
Freshchat: Vahaolana momba ny hafatra isaky ny dingana amin'ny dian'ny mpanjifa
Ampiasao ny sehatra iasan'ny orinasa matanjaka AI, mampifanaraka ny traikefan'ny mpanjifa, manatsara ny famokarana ny mpiasa ary manome tanjaka ny tontolo iainana ny mpamorona sy ny mpiara-miombon'antoka. Mizana amin'ny alàlan'ny sehatra Freshworks.
Taratrafm - manaova mpitsidika alohan'ny hivoahany ny tranokalanao amin'ny fampiasana bot sy fampielezan-kevitra. Ahenao ny tahan'ny fihenam-bidy ary karakarao ny mpitsidika amin'ny fikasana ambany hividy.
Customer fanohanana - manohana sy mitazona ny mpanjifa, manome fahafaham-po amin'ny ambaratonga. Mandrosoa valiny mandeha ho azy, misambotra resaka ary manome naoty ny valintenin'ny ekipa mpanohana anao.
Fifandraisan'ny mpanjifa - mamoha fitomboana amin'ny alàlan'ny fanovana ireo mpitsidika ho mpanjifa mavitrika. Lazao ny tolotra manokana na hafatra mifototra amin'ny hetsika.
Anisan'izany ny Freshchat Features
Hevitra momba ny fampielezan-kevitra - Fatra. Manatsara. Avereno. Makà ny fahitana ny metatra toa ny tahan'ny hita, nalefa ary valiny.
Channels - Ho fanampin'ny tranokalanao, ny Freshchat dia sehatra mitambatra izay afaka miharo amin'ny kaontin'ny orinasao amin'ny Slack, WhatsApp, Apple Business Chat, Line, Facebook Messenger, ary Mobile Apps.
Chatbots - Manàna fifehezana feno momba izay angatahina sy ny fomba fangatahana amin'ny alàlan'ny alàlan'ny dalambe bot namboarina. Avelao ny bototy hanolotra ny mpitsidika ny ekipanao rehefa maneho ny heviny ratsy ireo mpitsidika izay mitaky fikasihan'olona.
Clearbit Integration - Manolo endrika miaraka amin'ny ClearBit Integration. Ataovy personalize ireo hafatra mifototra amin'ny haben'ny orinasanao mpitsidika, ny indostria ary ny hetsika ao amin'ny piraofilina sosialy.
CoBrowsing - Mitovy amin'ny pejin'ireo mpampiasa anao - Tariho lavitra izy ireo amin'ny fidirana amin'ny efijery sy firesahana amin'izy ireo.
Targeting manokana - Ireo mpitsidika kendrena mifototra amin'ny fepetra misy anao na mandroso lavidavitra kokoa ary mamorona anao manokana.
Email Notifications - Mandraisa anjara na dia aorian'ny filatsahan'ny firaka avy amin'ny tranonkalanao aza amin'ny fampandrenesana mailaka.
Enterprise - Vahaolana amin'ny laharam-pahamehana amin'ny orinasa mba handrefesana mora foana ny fanohananao raha mbola mitazona ny fifandraisan'ny mpanjifa manokana sy tsy misy ezaka.
Fisehoan-potoana - Raiso ny tantara feno amin'ny fitetezana ny mpitsidika anao amin'ny tranokalanao mandritra ny volana, andro ary ora amin'ny tontolo andro.
Helpdesk Insights - Raiso ny fahitana rehetra ilainao mba hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa amin'ny dashboard, helpdesk, ary ny tatitra ataon'ny mpikambana ao amin'ny ekipa.
FAQ amin'ny-Messenger - Avelao ireo mpitsidika hahita vahaolana avy ao anaty Web Messenger amin'ny alàlan'ny fampiasana ny bara fikarohana hikarohana FAQ. Ny fikarohana mahery vaika dia manome antoka fa tsy mila mandalo votoaty marobe ny mpampiasa raha te hahita valiny.
IntelliAssign - Ny fifampiresahana amin'ny lalam-pirenena mifototra amin'ny haavon'ny fahaizan'ny mpikambana ao amin'ny ekipanao - mpanafika, mpanelanelana na manam-pahaizana. Na zahao ary omeo hafatra amin'ireo agents mifototra amin'ny fitsipika, sivana ary teny lakile efa voafaritra.
Messenger amin'ny fiteny maro - Ny teny mety dia manamboatra na mamaky ny lalao. Ataovy amboarina ny zavatra lazain'ny mpitondra hafatrao ary safidio amin'ireo fiteny 33+
OmniChat - Manaova fitarika omnipresent miaraka amin'ny chrome extension.
Priority Inbox - Mijanona eo an-tampon'ny resaka izay manandanja indrindra. Sivana hafatra arakaraka ny ora famaliana.
Haino aman-jery manan-karena - Miaraka amina valinteny an-tsoratra dia azonao atao ny mampiditra horonan-tsary, sary, emojis, sticker na PDF ary antontan-taratasy ao anatin'ny valinteninao mandeha ho azy sy amin'ny boky torolàlana.
SmartPlugs - Misintona angona avy amin'ny fampiharana ivelany toy ny CRM na fitaovanao mandeha ho azy amin'ny marketing na manosika angona ho an'ireo rindranasa ireo raha te hanana konteks misimisy kokoa. Integrations ahitanao ny rindranasa workflow, CRM, sehatra varotra & varotra, horonan-tsary, telefaona, e-varotra, fanaraha-maso ny olana, automatisation marketing, rafitry ny fandoavam-bola, sy ny rafitra kaonty.
Safidy mitarika - Mandrisoa mihoatra ny indray mandeha mba hanasongadinana na indray mandeha fotsiny ho tsy spammy. Azonao atao ihany koa ny misafidy ny tsy handrisika ivelan'ny ora fiasan'ny ekipanao sy / raha eo ampovoan'ny resadresaka ifanaovan'ny mpitsidika anao ny ekipanao.
Fitsangatsanganana vokatra Freshchat Midira maimaim-poana
Fampahalalana: mpiara-miasa aminay i Fresh Chat.
Tags: resaka fandraharahana paomaBotkalandriehiresakachatbotcogniassistfampidirana crmfacebook messengerfreshchatFreshdeskfreshmarketerHighriseknowmaxchat amin'ny fiteny marovozongo crmmpiara-miasa omnistarpagatoPipedrivepipelinedeals crmsdkstoryXpressmivatraupscopebot webresaka amin'ny tranonkalaWhatsAppZoho